I-Word Foundation • Mayelana Nathi - Abashicileli bokucabanga nokubhujiswa
ILizwi Foundation, Inc.yinhlangano engenzi nzuzo eqashwe esifundazweni saseNew York ngoMeyi 22, 1950. Le yiyo yodwa inhlangano ekhona neyasungulwa futhi yagunyazwa nguMnu. Percival ngalezi zinhloso. Isisekelo asihlotshaniswa noma asixhunyanisiwe nanoma iyiphi enye inhlangano, futhi asisekeli noma sisekele noma yimuphi umuntu, umhlahlandlela, umeluleki, uthisha noma iqembu elithi liphefumulelwe, laqokwa noma lagunyazwa ngenye indlela ukuchaza nokuhumusha imibhalo kaPercival.
Ngokusho kwemithetho yethu, isisekelo singaba nenombolo engenamkhawulo yamalungu akhetha ukuyixhasa futhi ahlomule emisebenzini yayo. Kulezi zikhundla, kukhethwa ama-Trustee anamathalente akhethekile nezindawo zobungcweti, zona ezizokhetha iBhodi labaQondisi elibhekele ukuphathwa nokulawulwa jikelele kwezindaba zenhlangano. Ama-Trustee nabaqondisi bahlala ezindaweni ezahlukahlukene e-United States nakwamanye amazwe. Sihlangana ndawonye emhlanganweni waminyaka yonke kanye nokuxhumana okuqhubekayo unyaka wonke ukufeza injongo yethu esabelana ngayo-ukwenza imibhalo kaPercival itholakale kalula nokusiza abafundi esikanye nabo abasithinta abavela ezingxenyeni eziningi zomhlaba ukubhekana nezifundo zabo kanye nenselelo abantu abaningi ababhekana nayo. esifisweni sabo sokuqonda lobukhona basemhlabeni. Ngalokhu kufunwa kweQiniso, Ukucabanga Nekusasa ayitholakali ngokuya ngobubanzi, ukujula nobukhulu.
Futhi-ke, ukuzibophezela kwethu nokuphatha kwethu ukwazisa abantu bomhlaba okuqukethwe nencazelo yencwadi Ukucabanga Nekusasa kanye nezinye izincwadi ezibhalwe uHarold W. Percival. Kusukela ngo-1950, i-The Word Foundation isishicilele futhi yasabalalisa izincwadi zikaPercival futhi yasiza abafundi ekuqondeni imibhalo kaPercival. Ukufinyelela kwethu kunikeza izincwadi iziboshwa kanye nemitapo yolwazi. Siphinde sinikeze izincwadi ezinesaphulelo lapho zizokwabiwa nabanye. Ngohlelo lwethu Student to Student, sisiza ukwenza lula indlela yamalungu ethu angathanda ukufunda imisebenzi kaPercival ndawonye.
Amavolontiya abalulekile enhlanganweni yethu njengoba asisiza ukuba sandise imibhalo kaPercival ekufundeni okubanzi. Sinenhlanhla yokuthola usizo lwabangani abaningi eminyakeni edlule. Iminikelo yabo ihlanganisa ukunikela izincwadi kumatapolabhu, ukuthumela izincwajana zethu kubangani, ukuhlela amaqembu okutadisha abazimele, nemisebenzi efanayo. Sithola futhi iminikelo yezezimali ebalulekile ekusizeni ukuba siqhubeke nomsebenzi wethu. Siyakwamukela futhi sibonga kakhulu ngalolu sizo!
Njengoba siqhubeka nemizamo yethu yokwabelana ngokukhanya kwefa likaPercival ebantwini, simema ngokufudumele abafundi bethu abasha ukuthi bajoyine nathi.
"Umlayezo Wethu" kwakuwumhleli wokuqala owabhalwa nguHarold W. Percival ngomagazini wakhe owaziwayo wenyanga yonke, The Word. Wakha inguqulo emfushane yokuhlela njengekhasi lokuqala lalo magazini. Ephezulu iUkuphindaphindeka kwalo mfushane inguqulo kusuka umqulu wokuqala wamashumi amabili nanhlanu womqulu oboshiwe, ngo-1904 - 1917. Ukuhlelwa kungafundwa ngokuphelele ku Ikhasi labahleli.